isitolo sezingubo - Etagtron, Inc.
Isixazululo Sesitolo Sezingubo
Amasango afakiwe emnyango wesitolo, inani lesango linqunywa ububanzi bendawo yokungena nohlobo lwesango.
Uzosetshenziswa kumuphi umaki noma ilebula?
Ithegi yokuphepha Okwezingubo:
Ehlobo izingubo, Indwangu ekhanyayo efana nezingubo, iziketi, amasudi okudlala, isikibha, i-Etagtron inikezela ngethegi yokuphepha ngephinikhodi elifishane engu-16mm noma eyenziwe ngezifiso ukuze ivikelwe. Ikakhulukazi ngendwangu kasilika, kusetshenziswa ithegi ka-Etagtron ene-lanyard ngenkinobho, okungcono ukuvimbela umonakalo.
Ithegi yokuphepha okwezicathulo:
Ithegi yokuphepha ngoba Bag & Impahla:
Ithegi yokuphepha Izesekeli zemfashini:
Ungawasusa kanjani amathegi?
Sebenzisa amandla okukhipha amandla kazibuthe ukususa umaki wokhiye kazibuthe.Ngokhiye kazibuthe, kunezinhlobo ezimbili zokukhiya: ukukhiya okujwayelekile nokukhiya okuhle, ukukhiya okujwayelekile, ungasebenzisa i-detacher ngamandla kazibuthe ama-8000gs ukuyisusa, ukuze ukhiye kakhulu, udinga ukusebenzisa i-detacher ngamandla kazibuthe ayi-16000gs.